हामी पनि संगसंगै हामी पनि संगसंगै
हामी पनि संगसंगै
बैशाख ०१, २०७७
भनिन्छ पत्रकारीता समाजको ऐना हो । यसले स्थानिय,राष्ट्रिय साथै अन्र्तराष्ट्रिय समाज व्यवस्थासंग सम्वन्ध राख्दछ । नेपालमा पनि संचार प्रणालिको तिव्र गतिमा विकास भईरहेको छ । संचार क्षेत्रको विकास र विस्तारले विश्वलाई नै एउटा सानो गाँउको रुपमा परिणत गरिदिएको छ । संचारले समाज विकासमा पुर्याएको योगदानकै कारण आज पत्रकारीतालाई चौथो अंगको रुपमा व्याख्या गरिदै आएको छ । छापा माध्यमदेखि श्रव्य,श्रव्य–दृष्य हुदै अनलाईन माध्यमसम्म आईपुग्दा समेत गुणस्तरीयतामा खासै फड्को मार्न अझै नसकेको कुरा यर्थाथ हो । ईतिहासको तानाशाह,पञ्चायती व्यवस्था,प्रजातन्त्र लगायत विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै नेपालको संचार माध्यम अहिलेको अवस्थामा आईपुगेको हो । विशेषत पछिल्लो दुई दशकदेखि विकसित अनलाईन माध्यम र यसको प्रविधिको प्रयोगले विश्व मानव समाजमा सुचना र संचार संवाहनको गतिविधिमा अकल्पनिय परिवर्तन देखा परेको छ । तसर्थ हामि पनि समाजको ऐनाको रुपमा चित्रित हुन आज देखि विधिवत रुपमा नयाँ वर्षको शुभकामना सहित तपाईमाझ आएका छौ । “सम्पूर्ण कुरा”ले सुचना तथा संचार क्षेत्रका बहुआयामिक पक्षहरुमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने छ । सार्वजनिक चासो र गतिविधिहरुमा सत्य र तथ्यमा आधारित रहि, पत्रकारीताको आफ्नो आचारसंहिता भित्र रहेर हरेक सवाललाई विश्वसनिय तवरले उठान गर्ने छ ।
पत्रकारीता गर्नु मात्र ठुलो कुरा होईन । आजभोलि पत्रकारीता, प्रचाकारीता तर्फ रुपान्तरीत भईरहेको छ । Journalism is for Public not for Publicity भन्ने मूलमन्त्रलाई सम्पूर्ण कुराले आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्ने छ । यसले समाज परिवर्तनमा कस्तो भूमिका खेल्दछ भन्ने पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ “सम्पूर्ण कुरा”ले मानवीय र सामाजिक यर्थाथताको उजागर गरी समाजलाई गतिशिल,चेतनशील र उन्नतशील बनाउन अतुलनिय भूमिका खेल्नेछ । “सम्पूर्ण कुरा”को उदेश्यनै गहकिलो दूरदृष्टि लिई मनोगत कल्पनाशीलता भन्दा तथ्यको आधारमा मानवीय मूल्य मान्यतालाई सन्मार्गतर्फ डो¥याई समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हो । “सम्पूर्ण कुरा” प्राज्ञिक बौद्धिक विमर्शको केन्द्र बन्नेछ जहाँ “सबै कुरा एकै ठाउँ” हुनेछन् ।
ज्ञानज्योतिले जन्माएका पत्रकारिताका हस्तीहरु
स्थानिय तहमा न्यायीक समितिको प्रभावकारीता तथा सुधारको बाटो
अनलाइन कक्षा कति सान्दर्भिक ? ( सम्पादकीय )
स्थानिय स्तरमा उत्पादित कच्चा पदार्थलाइ उद्योगमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने अध्यक्ष गिरीको जोड ।
महिलाहरु चुलो चौकोमा मात्र सिमित हुन नहुने दङ्गिशरण उपाध्यक्ष खड्काको धारणा
निरोगीताका लागि योग भन्ने सन्देश सवैमा जानुपर्छ : अध्यक्ष गिरि
दंगिशरण गाउँपालिकाले ल्यायो आगामी आर्थिक बर्षका लागि ४६ करोड ९४ लाखको बजेट
दङ्गिशरण गाउँपालिकामा पारिवारिक बिबरण संकलन आज बाट गरिदैँ
यस्तो छ वि‍.सं २०७९ सालको वार्षिक राशिफल
एक हजारलाई किन लेखिन्छ 1k ? यस्तो छ अर्थ
‘सफलताको बाटो’ जिवन बदल्ने खुराक हुन सक्छ : डिल्ली बस्नेत ‘संगीत’
प्रसिद्धि ईन्टरटेन्मेन्ट्स प्रा.लि.